Olee otú ike kaadị Exchange - Blockchain News
Olee otú ike kaadị Exchange
Anyị na-ewetara gị ntị N'ajụjụ ọnụ onye nchoputa na CEO nke kaadị Exchange btc-alpha.com Vitali Bodnar, otú ike kaadị Exchange site ọkọ.
Olee otú ị maara banyere Cryptocurrency?
My iche iche na-akụziri – physics, kọmputa sayensị, nkà na ụzụ kọmputa, M nọgidere na-aku development. N'ụzọ ụfọdụ, m na mmadụ na mberede na-agụ na forum banyere bitcoin wee malite ịghọta na ụbọchị, agụ ihe niile banyere otú o si arụ ọrụ.
Olee otú ị ga-esi n'ime kaadị ụlọ ọrụ?
Ọ niile malitere na na m na-eche otú Ngwuputa na-aga. Mgbe figuring usoro, e nwere onye ọzọ nsogbu – ihe na-eme mkpụrụ ego m na minted. M wee were ego na mgbanwe, nke, N'agbanyeghị, na-arụ ọrụ nnọọ mgbe. N'ihi ya, m were were Switched trading.
Gịnị mere ị na-ekpebi na ị chọrọ ike a kaadị Exchange?
Nke a bụ n'ihi na m na mbụ ọdịda. m, dị ka ezi ihe ọ bụla ozu ahia, nwere a set nke iwu na m na-adịghị emerụ: Akpara m tupu ụzọ ọpụpụ ebe ke itie, M anaghị arụ ọrụ mgbe m na-enwe nchegbu, M na-agbalị bụghị idozi minuses, ọ dịkwuoro m mfe ichere, Adịghị m recoup na na ụbọchị mgbe m na-aga mwepu, M nnọọ na-emechi m na laptọọpụ na anaghị arụ ọrụ. My ọdịda mere n'ihi nchegbu, na na na oge m mebiri ndị ọzọ niile na iwu. M wee banye a ọjọọ ndibiat, emechi ya na-adịghị mma, kpebiri recoup. N'ihi na otu ụbọchị, m mụụrụ 10 arụmọrụ a dịruru ná njọ. M furu efu a ole na ole iri puku kwuru iri puku dollar, nke m akwụ n'elu a nnọọ ogologo oge.
Olee otú nke a si metụta ndị e kere eke nke Exchange?
M wee malite ịtụle ọnọdụ ahụ ma chọpụta na a ahia nwere ike irite, ma ọ bụ ida ego. Ma mgbanwe mgbe niile na-anọgide na a na-agbata n'ọsọ. M ghọtara na ihe a niile bụ nnọọ ihe na-akpali ma na m chọrọ ike m kaadị Exchange.
Ka 5 iji ike gị kaadị Exchange.
Maka m, ihe mbụ bụ na “ọkụ na ngwaahịa.” Iji enyi m niile, enyi, ọbìa, M gwara onye ọ bụla na m na-na-emepe emepe kaadị Exchange na m mkpa a otu, ndị mmadụ, ego, na onye ọ bụla kwuru na nke a ga-arụ ọrụ, ma m nwere a crazy okwukwe. All nke a bụ ihe dị na 2014-2015.
Ebe ọ bụ na m nwere a mma aha nke na-emepe emepe oru, ndị mmadụ ozugbo pụtara bụ ndị ekweghi na ndị cryptocurrency, bụghị na kaadị Exchange, ma na m dị ka a Mmepụta onye nwere ike ịmepụta a ngwaahịa.
Ná mmalite, M nwere echiche na ị pụrụ a njikere mere isi nke Cryptoexchange, gbanwee ya a obere, na ya ga-arụ ọrụ. Dị ka nyiwe maka onlineshop. Ma ndị dị otú a ngwaahịa adịghị. Anyịnwa ịhụkwu n'ime isiokwu, Aghọtara m na m chọrọ ide ihe niile si ọkọ na-aghọta ihe niile n'ụzọ zuru ezu.
The nzọụkwụ nke abụọ?
Ịgbakọ dum azụmahịa nlereanya. N'oge ahụ, anyị na-eji bitcoinwisdom – otu n'ime ndị mbụ ego ebe ị pụrụ ịhụ otú ndị ahịa na-na-akpụ akpụ, ma nyochaa ihe niile n'ihi na a ụbọchị, a ọnwa, na-ahụ mpịakọta. Ọmụmaatụ, na n'ọnọdụ a ụbọchị ekenịmde arụmọrụ na 5000 bitcoins na a nhazi ọnụego mgbanwe nke $ 500. Exchange Commission – 0.4%. 500 na-uba site 5000 na site 0.4 na anyị na-enweta a puru omume uru kwa ụbọchị.
Ya mere, azụmahịa nlereanya ka mgbanwe bụ nnọọ mfe?
Ee, M kwere na ọ bụrụ na ụfọdụ ihe bụ nnọọ mgbagwoju anya, mgbe ahụ, ọ ga-arụ ọrụ, na mfe ihe na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ nke atọ?
Nkwadebe nke oru nkọwa. M ga-asị na mbụ oru ọrụ m kere na n'ihi nwetara bụ fundamentally dị iche iche ihe, n'ihi na aghọtaghị m ihe a nnọọ ukwuu nke nkọwa, ụfọdụ oge na yiri m oké mkpa abụghị mkpa na niile, na na Kama. Nke a bụ a ọkọlọtọ akụkọ.
Gwa m na ihe nkowa, Olee otú ị ga-eme TS? Olee ebe o ga-esi na ozi?
N'oge ahụ, M ahịa na ọtụtụ mgbanwe na hụrụ otú DDoS ọgụ ime, hụrụ otú mgbanwe wee odida, hụrụ mgbe ọrụ ndị eguzosi ike mgbanwe, na mgbe ha mere abụghị, na ihe mere na ọ mere. M debara aha na okwu nke akwụkwọ m ahụmahụ, M mere a ngwaahịa na nke m dị ka a ahia ga-ala. M chọrọ niile arụmọrụ na-nghọta. M na-eji usoro ihe omume ịmepụta otu interface, ebe m sere 25 peeji nke ga-eme n'ọdịnihu na saịtị na wuru ya mgbagha. Ọzọkwa, niile Cryptoexchanges ndị nwere ihu ọma otu.
Ugboro ole ka ị na-eji njikere mere oru ngwọta?
Achọrọ m iji na-enweta na-eziga bitcoin blockchain.info. N'oge ahụ, ha nyere a ọha API. Mgbe mbụ ogbo, ya yiri m ka ọ bụ zuru ezu na nke kacha mma na o kwere omume ngwaahịa na di ntakiri expenses, na mgbe nanị ka mma na mma ọ bụla ihe. Ma ha agọ anyị, enweghị na-akọwa ihe mere. M na-eche na nke a bụ otu n'ime ndị kasị ihe ịga nke ọma ọdịda mere. Anyị kpebiri chepụta otú Bitcoin ọrụ, na dere anyị ahịa kpam kpam site na ọkọ, nke dị ugbu a mgbe niile rụọ. nke ahụ bụ, anyị nwere anyị Bitcoin obere akpa.
The anọ nzọụkwụ?
Nke a bụ Team. M ama ama a na-achikota otu, onye anyị na-arụ ọrụ na abụọ oru. Ma m chọpụtara na anyị na-enweghị ahụmahụ na-ike a quality ngwaahịa na cryptosphere. Ya mere, anyị kpebiri imipu anyị ihe ọmụma ndị ọzọ ihe aga-eme, ọmụmaatụ, abuana ke mmepe nke nchedo DDos-ọgụ, ọrụ maka inweta ego, were gabazie. Ruo afọ atọ na anyị na-arụ ọrụ na oru ọrụ ke ukem – na-atọ ndị ọzọ oru aka ịghọta otú ihe niile ọrụ. N'ihi nke a, anyị na-ọkọdọ maara ọkachamara bụ onye nyeere gụkwuo anyị oru ngo.
The ise nzọụkwụ?
The kasị banal bụ ego. Na mbu, M bụ ike na-anakọta dị $ 300,000. Nke a bụ afọ nke otu egwuregwu nke programmers, na kacha nta na-akwụ ụgwọ, ma enweghị banyere iwu ọrụ. Ma, ọ bụ na 2013. ugbu a, Echere m, a kacha nta nke $ 1 nde dị mkpa. Anyị malitere na a dị iche iche asọmpi gburugburu ebe obibi na ndị ọzọ na ọnọdụ, mgbe e nwere nanị 5 ngwaahịa mgbanwe, na ugbu a, e nwere ọtụtụ narị ha.
Gịnị bụ Geolocation nke ọrụ gị?
Ụwa dum, ma ugbu a anyị gbochie ndebanye si America n'ihi iwu mbipụta.
Olee otú ọtụtụ ndị ọrụ na-etinye aka nche?
Ọ bụrụ na e nwere onye na ngwa ngwa ọrụ, mgbe dum otu na-eme ya, na n'agbanyeghị ihe ya mere.
Ọ bụ n'ebe a bounty maka ịchọta vulnerabilities? na ihe?
Ndị ọzọ ụbọchị, ugwo bounty maka ịchọta ekwe omume nke adịgboroja na-ewe e-mail nchịkwa. N'ezie, ha apụghị ime eme ya, ma, ọ bụ madu puru na-uru nke a vulnerability.
Na ole mere ha na-akwụ?
A narị ole na ole, a obere ego, ebe a abụghị a dị oké egwu vulnerability. Anyị nwere ndepụta nke na-akwụ ụgwọ maka ịchọta ndị ọ bụ ndị ọzọ ọma.
Gịnị bụ isi trading ụzọ abụọ gị mgbanwe?
BTC / USD, LTC / USD, BTC / Ego, Biotek / Zcash.
Olee otú m nwere etinye m iriba gị mgbanwe?
Anyị nwere ngalaba maka agbakwunye ego, na na ọ na-egosi n'ụzọ doro anya na ndị anyị nwere ike tinye na-adịghị.
Daalụ maka na-adọrọ mmasị N'ajụjụ ọnụ
Kwadebere site CryptoRadio otu
Gbasie faịlụ patent ịnabata Bitcoin maka igbe
Global mbupu Gian ...
Large homebuilder na Ireland na-anabata Bitcoin
Ballyclare dabeere Hag ...
New eweta na Quebec amalite Bitcoin Ngwuputa arụmọrụ
Previous Post:Blockchain ngo DFINITY Stiftung ewelite $ 61M
Next Post:Canadian kaadị mgbanwe Coinsquare ewelite $ 30M
Rosia Bence kwuru:
February 12, 2018 na 5:28 AM
make money on youtube views kwuru:
February 12, 2018 na 2:51 PM
New Cryptocurrency Giving Away Free Coins kwuru:
March 1, 2018 na 9:58 AM